Faa’idooyinka Aadan Ogeyn Ee Qubka Mooska Uu Leeyahay | Xaqiiqonews
Faa’idooyinka Aadan Ogeyn Ee Qubka Mooska Uu Leeyahay
Soomaaliya si maalinle ah ayuu mooska qeyb uga yahay cuntooyinkeena, waxaase dhacda in qubka mooska aan iskaga tuurno qashinka, iyadoo la ogyahay faa’idooyinka caafimaad ee qubka u leeyahay jirka iyo maqaar.
Sida Xaqiiqonews ay soo tarjuntay faa’idooyinka qubka mooska waxaa ka mid ah:
1- Qubka mooska waxaa uu quudiyaa maqaarka bani’aadamka: tusaale ahaan maadada Zink ee qubka leeyahay waxa ay ka hortagtaa finan qooqa (finanka dhalinyarada ka soo baxa). Waxaa intaasi barbar socda Vitamin G kaasi oo maqaarka ka saacidaya in uu soo saaro maadada collagen oo lagama maar maan u ah maqaarka iyo dib u cusbooneysiintiisa.
Sidoo kale Aqri: Dimasho Ayey Keeni Kartaa.. Cuntooyinkan moos ha ku cunin
Waxaa lagula talinayaa in aad wajiga ku xoqdo qeybta gudaha ee qubka mooska, muddo 5 daqiiqo ah todobaadkiiba hal mar si aad u hesho maqaar aan laheyn nabaro.
2- Waxa uu ka hortagaa calaamadaha duqnimada: tusaale ahaan waxaa uu naga ilaaliyaa jajaca wajiga maadaama ay ku jiraan antioxidants, sida maadada Lutein oo kale.
3-Waxa uu Daawo u yahay Cudurka maqaarka ku dhaca ee psoriasis, maxaa yeelay qubka muuska waxa uu leeyahay antioxidants iyo amino acids kuwaasi oo goobta cudurka ka dhacay ka caawinaya in ay hesho qoyaan, sidoo kale qubka mooska ayaa hoos u dhigaya rabitaanka qofka u baahanaaya in uu xoqo goobta cudurka ku dhacay, ogow mooska waxaa lagu soo daraa oo uu qeyb ka yahay kareemada loo isticmaalo maqaartka sida kuwa loo isticmaalo cambaarta iyo psoriasis